Dambiile Beel Daaje, Jwxo-shiil Jabhad Uma Daneeyee Qabiil Buu Doogsin Dhabaa – Rasaasa News
Mar 29, 2010 caydiid, Jwxo-shiil, Silent cry, south afrika
Dr. Cabdi Caydiid Xiirey sanadkii 2000 “Maxamed Cumar Cismaan ninkii yidhaahdo waa Jabhad halgan wada waa beentiis, ninkii yidhaahda waa kaaba qabiil reer isaaq oo waa runtiis”
Ciyaalkii London iyo Afar Haaruun ah oo Xaqooti ku ah South Afrika oo uu Jwxo-shiil Guri madow la galay gargaar intee la egg ayey u gali karaan halgankii uu gonda-gooyey goxoshe aan garasho lahayn.
Jwxo-shiil, oo ah nin aan waligii dhaqaaqin qabiil la,aan ayaa waxaa uu marti u yahay wiil reer haaruun ah oo ka ganacsada South Afrika iyo afar kale oo looga yeedhay magaalooyin ku yaal dalka South Afrika.
Waxaa kale oo uu Jwxo-shiil u yeedhay dhalinyaradii London u sacabin jirtay ee reerkiisa oo iyagu horeba wax uga tari waayey Ingriiska si ay ugu wehel yeelaan South Afrika. Waxaana laga tagay Cabdishakuur Cabdi Fagadhe oo ahaa wiilkii soo duubay sawirada “Silent Cry” oo la is yidhi yuusan waxba ka ogaan sida xun ee aad uggaga dawarsanaysanayo South Afrika sawirada “silent Cry”.
Waxaa la sheegay in mar ay kulmeen beesha Jwxo-shiil ee gurmadka ku tagtay South Afrika, in ay beeshu su,aal ay waydiisay ay ahayd xagee halgankii aynu ku xoogsanaynay uu marayaa gudoomiyow, wax cusub Jwxo-shiil umma sheegin, wuxuuse aad uga calaacalay xaga dhaqaalaha waxaana uu yidhi beelihii aan dhaqaalaha ka heli jiray way joojiyeen sida; Warfaa, Abraahiin, Bahgari iyo Tolomoge oo iyagu Ina Sooyaan warkiisa qaatay.
Sida dhabta ah ummada Somalida Ogadeeniya way wada ogg tahay Jwxo-shiil, ruuxa uu yahay, waxaa kale oo la ogg yahay fikirka gaaban ee aan rog rogida lahayn ee uu ku kala diray ummada Somalida Ogadeeniya. Sawirada “Silent Cry” ee ay dhalinyardu sameeyeen, waa qayb ka mid ah raadadkii ugu dambeeyey ee halgankii aynu wadnay ee uu sida xun u isticmaalay Jwxo-shiil.
Waxaad wada ogg tihiin waxa ka jira gudaha Somalida Ogadeeniya, in ciidamadii awooda lahaa ee ay Eritrea inoo tababartay in aynaan fara ku haynin, oo ay u qaybsameen, Yeman, Kenya, South Afrika iyo in kolkii ay wayday meel kale oo ay aado Kaalinka miciin biday. Ma isweydiiseen waxa kalifay in ay arintaas ay dhacdo? Jawaabtu waa Jwxo-shiil.
Awooda ugu badnayd ee halganka waday waxay ahayd dadka u dhashay Somalida Ogadeeniya ee ku nool dalalka reer galbeedka, Jaaliyadahaas oo maanta is karhid mooyee ayna jirin wax wada socda, taas oo markhaatigeedu uu yahay Jwxo-shiil, oo xitaa lagu weeraray TV Universal oo damcay in uu waraysi ka qaado. Dadweynow ma isweydiiseen yaa burburka iyo isnacaybka Jaaliyadaha dalalka reer galbeedka ka dambeeyey? Jawaabtu iyana waa Jwxo-shiil.
“Dawo ma leh qabyaaladi wax ay dumiso mooyaan” Somalida Ogadeeniya waxaa dib ugu soo noqotay qabyaalad waa hore ka suushay, waxayna kala fadhiyaan makhaayado kala gooniya oo shaaha lama wada cabo, waana wax bilowday muddo dhawr sano ah. Hadaba arinta qabyaalada yaa beeray baad u malaynaysaan? Jawaabta 3aad waa Jwxo-shiil.
Jwxo-shiil, waxaa uu sheegtaa in uu madax y yahay kooxda Jwxo-shiil, kolka uu safar dal tagayana guri aan reer haaruun ahayn ma seexdo, waxa waardiyeeya ee ku soo dhaweeya meelaha uu tagana waa beel ku jabhad.
Waxaa la yaab leh oo wax lagu qoslo ah, in Jwxo-shiil, oo aad oggtihiin maanta meeqaanka uu ka taagan yahay Somalida Ogadeeniya, in kolkii uu ka quustay dalalkii ay deganaayeen dadkii halganka dabo tinkaari jiray, uu is leeyahay ka kaluumayso dal Afrikan ah, oo ay joogaan dad cusub oo qaxooti ah.
Jwxo-shiil, oo beel marti ugu ah South Afrika, oggna in uu ku sifoobay arimahaas kore oo dhan, ayaa kol uu qol kula hadlay beeshiisa been u sheegay oo yidhi “halganku maanta ayuu ugu xoog badan yahay, reer warfaana waan ka adkaan doonaa”.
Jwxo-shiil oo ay ahayd in uu cimri camal iyo cibaado ku jiro, ayaa cadaab shaqaysta maalin walba, oo aan qawl run ah marna sheegin.
South Afrika oo ah meel maalin walba lagu dilo dhalinyaro Somali ah oo xoogsi u tagtay Jwxo-shiil, u malayn maayo in uu xoolo ka heli ama uu ka heli dad uu indha xidho, balse waxaa uu qayb ka noqon doonaa laynta dhalinyarada Somaliyeed ee ka xoogsata South Afrika.